Nandamina fitsangatsanganana manerana an'i Eoropa | News Travel
Vaovao momba ny dia | 25/04/2022 17:36 | Fialantsasatra any Eropa
Ny fitakiana mifandraika amin'ny hetsika fitsangantsanganana tsy nitsahatra nitombo tato anatin'ny taona vitsivitsy. Ny areti-mifindra na ny confinement dia nahatonga ny olona hihamaro sy hanome lanja ny zavaboary sy ny fahafahan'ny mpizahatany atolony.
Noho izany antony izany, ny orinasa tia OrbisWays nanomboka nikarakara fitsangatsanganana nanerana ny kaontinanta Eoropeana izy ireo.
Araraoty ny fialan-tsasatra hanaovana fanomezana lalana tombony maro. Anisan’ny famporisihana tena sarobidy amin’ny mpanjifa ny fanaovana fanatanjahantena, ny fifandraisana amin’ny zavaboary ary ny vidiny mirary raha oharina amin’ny toerana hafa. Ankoatra izany, Manana zoro tsy tambo isaina i Eoropa ary lalana feno hatsarana, manana ny firenentsika ho iray amin'ireo lalana malaza indrindra eran-tany: ny Camino de Santiago.
1 Ny lalana an-tongotra tsara tarehy indrindra any Eoropa
1.1 Làlan'i Santiago
1.4 Peaks ao Eoropa
Ny lalana an-tongotra tsara tarehy indrindra any Eoropa
Orbis Ways, orinasa manam-pahaizana manokana amin'ny fikarakarana lalan-tongotra, dia namokatra a lisitry ny toerana tena ilaina avy amin'ny vahoaka Eoropeana. Noho ny lazany be dia be, ny Camino de Santiago no voalohany. Na izany aza, misy safidy hafa tsy mampino koa mba hahafantarana ny kaontinanta Eoropeana.
Ny Camino de Santiago dia lalana fitsangatsanganana izay ara-panahy, fivavahana ary natiora mitambatra amin'ny hevitra mitovy. Noho ny toerana halehany dia manana ny Camino de Santiago teboka fidirana maro ary lalana samihafa. Noho izany, ny mpandeha dia afaka misafidy ny hanaraka ny lalana frantsay, portogey, anglisy, primitive, sns. Raha ny momba ny sisintany nasionaly, ny Camino de Santiago avy any Sarria Io no lalana voatokana indrindra, dia azo atao ao anatin'ny 6, 7 na 8 andro.
Ny mampiavaka ny Camino de Santiago, ary ny antony mahasarika mpizahatany an'arivony isan-taona, dia mifandray amin'ny azy. toetra ara-panahy. Na dia lalana nataon'ny mpino ihany aza izany taona vitsy lasa izay, dia maro ny mpandeha ankehitriny miloka amin'io lalana io, na inona na inona finoan'ny tsirairay. Ary ny lalana dia feno hatsaran-tarehy, dia mamakivaky tanàna sy tempoly manana tantara lehibe ary mamela anao hihaona amin'ny olona avy amin'ny vazan-tany samihafa. Fanampin'izany, ny fandraisana orinasa manokana amin'ny fandaminana ny lalana dia ahafahana manana hotely sy efitrano tsirairay tsy misy ahiahy.
Ao amin'ny Ranomasimbe Atlantika dia misy nosy kely fantatra fa tena tsara tarehy: Madeira. Na dia misy mponina aza, dia tsy tambo isaina ny nosy Portiogey tany virjiny izay ikambanan’ny voninkazo sy ny hantsana amin’ny manga ny ranomasina. Noho izany antony izany, tato anatin'ny taona vitsivitsy dia nanjary nalaza teo amin'ireo tia zavaboary ny lalan'ny diany.
Ny iray amin'ireo tombony lehibe amin'ny Madeira dia mifandraika amin'ny azy toetrandro malefaka. Toy ny any amin'ny Nosy Canary, Madeira dia manana toetrandro toy ny lohataona amin'ny ankamaroan'ny taona. Ankoatra izany, ny biby sy zavamaniry voajanahary tsy mitsahatra mampiaiky volana ireo mpandeha izy ireo, izay azo ankafizina amin'ny alàlan'ny lalana misy fahasahiranana samihafa mizara manerana ny nosy.
Madeira dia afaka mitsidika anao tsy miankina na amin'ny alàlan'ny orinasa fitsangatsanganana. Amin'ity tranga farany ity, ny lalana dia hanana a hitari-dalana izay hanazava ireo teboka manan-danja sasany amin'ny jeografia sy ny toetra voajanahary ao amin'ny vondronosy.
Amalfi dia tanàna iray any atsimon'i Italia izay nambara Lova eran-tany tamin'ny 1997. Toy ny tany Espaina nitranga tamin'i Ibiza na Mallorca, Amalfi dia manana hatsarana izay mihoatra ny fizahan-tany fahavaratra ary tora-pasika paradisa. Raha ny marina, amin'ity faritr'i Italia ity dia afaka mahita tanàna mpanjono nentim-paharazana, lalana misy zavamaniry mahavariana ary ny malaza «lalan'ny andriamanitra», lalana manaitra izay miafara amin'ny fomba fijery mahafinaritra ny Ranomasina Mediterane.
Amin'ny ankapobeny, Amalfi dia manolotra hetsika manan-danja ho an'ny mpizaha tany: manomboka amin'ny tanàna sy tanàn-dehibe manaitra mankany amin'ny tora-pasika misy rano mangarahara sy paradisa, amin'ny alàlan'ny làlam-tendrombohitra sy ny tontolo mahafinaritra.
Peaks ao Eoropa
El Picos de Europa National Park mandrakotra faritra manaitra ny firenentsika. Eo anelanelan'i Asturias, Cantabria ary León, ny faritr'i Picos dia fonenan'ny sasany amin'ireo biby manan-danja sy arovana indrindra ao Espaina, toy ny voromahery be volombava. Noho ny fanitarana lehibe dia manana ny Picos de Europa lalana an-tongotra manan-danja fantatra manerana an'izao tontolo izao, manana lanjany manokana amin'ny lalana Cares na ny lalana mankany Picu Urriellu.
Ny fizahan-tany any Picos de Europa ihany koa dia miavaka amin'ny azy tanàna saro-dalana (Bulnes na Sotres) sy ny sakafony tsy mampino, izay misy ny fromazy Cabrales, tsy isalasalana, ny sakafo kintana. Noho izany antony izany, ireo orinasa izay mikarakara fitsangatsanganana dia mamaky lalana, manandrana ary na dia mijanona mandritra ny alina ao amin'ny hotely rustic sy mahafatifaty.
Ho fanampin'ireo toerana ireo, ny mpanjifa Orbis Ways dia mamandrika lalana ihany koa mandeha an-tongotra any Tenerife, Cinque Terre, La Palma, Menorca, La Gomera, Santander, Babiera na morontsiraka avaratrandrefan'i Gresy.
Araka ny hitanao dia maro ny safidy, ary izy rehetra dia misy hetsika hafa ivelan'ny lalana. Inona no andrasanao hahafantarana an'i Eoropa amin'ny alàlan'ny toetrany?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fialantsasatra any Eropa » Nandamina fitsangatsanganana manerana an'i Eoropa
Inona no hojerena ao Haro